5 xilliga fasaxa dayrta: maxaad sugeysaa inaad xirto shandaddaada? | Bezzia
5 xilliga fasaxa dayrta: maxaad sugeysaa inaad xirto shandaddaada?
Maria vazquez | | safarka
Waxaan ka tagnay xagaagii laakiin ma dooneyno inaan baxno iyo baro meelo cusub. Laba, seddex ama afar maalmood ayaa ku filan inaad ku raaxeysatid meelaha fasaxa ah ee aan soo jeedineyno maanta oo kuu geynaya gaar ahaan meelaha quruxda badan xilligan oo kale.
Dayrta ayaa wasakhaysa muuqaalka midab casaan, midab iyo midab bunni ah, taasoo ka dhigeysa jardiinooyinkeena dabiiciga inay xirtaan caleemo cusub. Laakiin waxaan sidoo kale ka gudbi karnaa xuduudaha oo aan waqti badan ku luminayn duulimaadka, booqan karnaa magaalooyinka yar yar ee raaxada leh ee aan ku dareemayno guriga. Ma rabtaa inaad ogaato shanta fasax ee dayrta ee aan kuu diyaarinay?
1 Dooxada Baztan
2 Sierra del Segura
3 Hayedo de Tejera Negra
5 Degmada Lake
Seddexleyda Dooxada Baztan waxay kicisay xiisaha gobolkan Navarra halkaasoo aad ku neefsan karto xasilloonida iyo xiisaha dabiiciga ah. Gobol ay ku badan yihiin kaymaha dhirtu oo isbeddela xilli kasta halkaasoo aad sidoo kale ka ogaan karto daaraha waaweyn iyo guryaha beeraha dhagxaanta leh oo leh balakoonno waaweyn; monasteries facieval iyo buundooyinka ka booda wabiyada boodaya; yoolalka ku baahsan seeraha iyo buuraha ...
Shan iyo toban magaalo ayaa ka dhigaya gobolkan ugu fiican mid ka mid ah meelaha fasaxaaga loo baxo: Oronoz-Mugaire, Arraioz, Irurita, Almandoz, Berroeta, Aniz, Ziga, Lekaroz, Gartzain, Elbetea, Arizkun, Azpilkueta, Erratzu, Amaiur-Maya and Elizondo, the main magaalada dooxada. Xoqitaanka la kiciyey intii u dhaxaysay qarniyadii toddoba iyo tobnaad iyo sagaalaad iyo Lacagta Hindida iyo deriska ka soo shaqeeyay maxkamada Isbaanishka.
Dhexdooda waxaad ka heli doontaa guryo-beereedyo loo beddelay guryaha dalka oo raaxo lehs halkaas oo aad uga raaxeysan karto caadooyinka iyo dabeecadda saaxiibtinimo ee dadka Baztan. Waxaad sidoo kale u adeegsan kartaa saldhig ahaan si aad u fuliso qaar ka mid ah jidadka ama howlaha ugu caansan sida:
Dalxiis raad raaca tahriibiyeyaasha kaas oo ku biiraya godadka u dhow ee Urdax, Zugarramurdi iyo Sara
Ka soo qaado aragtiyada xiisaha leh Muuqaalka Ziga.
Booqo idaacadda Doolmiska Izpegi ama megaliths-kii Erratzu-Alduides.
Ku soco wadada Abartan, Safar dhan 12,60 km. markhaati ka ah dhaqan dhaqameed hore oo ka bilaabma Ziga.
Soco socodkii quruxda badnaa ee Biyo dhac Xorroxin. Jid u horseedda biyo dhac badan, meel dhirtu ku badan tahay.
Gobolka Sierra del Segura wuxuu qariyaa safafka buuraha ee ay kala soocaan dooxooyinka cidhiidhiga ah iyo biyamareeno qoto dheer oo ay xardheen wabiyo iyo durdurro. Waa meel mudnaan leh marka laga eego dhinaca bey'adda iyo muuqaalka guud ee ku fidsan koonfur-galbeed ee gobolka Albacete.
ka Villas qurux badan ka kooban, quruxda muuqaalka muuqaalka ee uu ka tallaabo webiga Madera iyo aagagga dabiiciga ah ee ilaalinta gaarka ah ee ku xaddidan juqraafiga juquraafiyeed ayaa ka dhigaya mid ka mid ah meelaha ugu xiisaha badan gobolka oo dhan uguna wanaagsan ee la booqdo xilliga dayrta.
Daraasiin dalxiis oo dalxiis ah, haa, waa inaad doorataa kuwa kuugu soo jiidashada badan, sida:
Si aad u booqato meelaha dabiiciga ah ilaalinta gaarka ah sida Chorros del Río Mundo iyo Cabaña de los Mojones.
Kala soco Riópar layaabka isha wabiga Mundo.
Ka soo qaado aragtiyaha ka Aragtida Liétor iyo Letur.
Cajiib tuulo qurux badan oo Ayna.
Ku raaxayso Bogarra iyo Paterna quruxda muuqaalka ay ka gudbeen Webiga Madera.
Isbaanishka waxaa jira meelo badan oo lagu raaxeysto shiraacyada midabada leh ee dayrta lagu xardho keynteenna, sida Tejera Negra beech forest, ee Gobolka Guadalajara. Midabada midabka leh, mooska dhulka qariya iyo aamusnaanta ay durduradu jebiyaan ayaa sameeya jawi riyadeed oo kale ah.
Waxaa lagu dhex daray Beerta Dabiiciga ah ee Sierra Norte de Guadalajara, keynta sidoo kale waxaa ka soo baxa beech, geed Pyrenean, Scots geed, yew, holly iyo bjchrk. Laba waddo oo wareeg ah Waxay kuu oggolaanayaan inaad ku sahamiso lug: "Senda de Carretas" (6km.) Iyo "Senda del Robledal" (20 km). Intaas waxaa sii dheer, sidoo kale waxaa jira waddo wareeg ah oo loo calaamadeeyay baaskiiladaha oo gaara wabiga Zarzas.
Waxaad ikhtiyaar u leedahay inaad ku timaadid gaari meesha waddooyinku ka bilowdaan. Waad uga tagi kartaa gaarigaaga meel gawaarida la dhigto oo gudaha ah (8km xarunta tarjumaadda) oo lagu gaaro iyadoo la adeegsanayo wadiiqo kayn ah. Xilliga dayrta, si kastaba ha noqotee, baarkinka gawaarida ayaa buuxsamaya sidaas darteed waa lagama maarmaan in horay loo sii qabsado. Caddaynta inay tahay mid ka mid ah meelaha ugu caansan ee lagu baxo.
Prague waa caasimada Czech Republic iyo tan riyooday gobolka Bohemian. Magaalo jecel inay tartiib tartiib u socoto oo gees walba ay leedahay wax aan kuu sheego. Ku luminta jidadkeeda bilowga xilliga dayrta waa khibrad aad u leedahay markii aad magaalada u lebbisanaysid hilaadin gaar ah.
Laba ama seddex maalmood ayaa ku filan in lagu ogaado jidadka qadiimiga ah ee Magaaladii hore, Ku raaxayso xasilloonida Magaalada Qadiimiga ah ee Yuhuudda iyo weynaanta Hradcany, degmada sare ee Prague, gal mid ka mid ah maktabadaha ugu quruxda badan adduunka, ka fikir fikradaha ka soo baxa saqafka Guriga Qoob-ka-ciyaarka ama dhadhamiya khamriga la daadiyey si aad u dareento mid dheeraad ah.
Boqortooyada Midowday (United Kingdom) waa wadan leh dalxiis aad u faro badan iyo jardiinooyin dabiici ah oo aan la soo koobi karin oo ay ka buuxaan dhul qurxoon iyo cagaar leh sida harada Lake. Waa kan ugu weyn jardiinooyinka dabiiciga ah ee Boqortooyada Midowday; ilaa siddeetan haro ayaa fadhida hareeraha beertan qaran ee ku taal waqooyi-galbeed ee England waana la caddeeyey Dhaxalka Aduunka.
Fursadaha ku jira seerahaan dabiiciga ah waa kuwo aan dhammaad lahayn. Waxaad mari kartaa wadooyin kala duwan oo buuraha ah, safri kara wadiiqooyinka isku xidha harooyinka, booqo mid ka mid ah magaalooyinka quruxda badan ee aagga, samee waxqabadyo biyo ah ... Saddex maalmood ama afar maalmood gudahood macquul maahan inaad wax walba aragto sidaa darteed waa inaad si wanaagsan u qorshaysaa baxsigaaga oo aad ka doorataa kuwa kuugu habboon booqashooyinka soo socda:
Ku soco jidka Orrest Head aragtida aan caadiga ahayn ee Harada Windermere.
Ku celceli nooc ka mid ah Isboortiga Acuatic : shiraacida, doonida iyo doonyaha kaxeeya harada Windermere ama Derwent Water.
Booqo Ambleside, magaalo qurxoon oo quruxsan oo buuxsan guryaha caadiga ah ee dhagaxa ku yaal aagga.
Soo ogow Forceghyll Force, oo biyo-dhac ah oo ku taal bartamaha keymo sixir ah.
Ka fikirida agagaaraha goobada dhagax waxaa qoray Castlerigg.
Ku kaxee jawiga riyada ee Balliga Buttermere iyo magaalada bohemia oo isku magac ah.
Miyaad horeba u booqatay mid ka mid ah meelaha aan kuu soo bandhigno inta lagu guda jiro fasaxa dayrta?
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » nololeedka » safarka » 5 xilliga fasaxa dayrta: maxaad sugeysaa inaad xirto shandaddaada?
Tallaabooyinka lagu barto ka fiirsashada
Khudaarta iyo saddex buug oo lagu fahmo
Waxyaabaha quruxda badan ee la doonayo